(၁) မင်းနှစ်သက်သောအရာကို လုပ်ပါ "လူသားတွေရဲ့ ပြင်းပြသောဆန္ဒသည် ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲနိုင်တယ်" လို့ Jobs က ဆိုတယ်။ စွန့်ဦးတီထွင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ Jobs ကမ်းလှမ်းထားတဲ့အကြံပြုချက်က "မိမိ၏ ပြင်းပြသောဆန္ဒကို သဘောမပေါက်ခင်အထိ တစ်စုံတစ်ခု (သို့) ယာဉ်မောင် အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်"။ အဲ့ဒီ့အရာတွေဟာ သူ့ကို ဘ၀အဓိပ္ပါယ်တွေ အများကြီးရခဲ့စေတယ်။ " ပြင်းပြသောစိတ်ဆန္ဒသည် အရာရာအောင်မြင်စေသည်။
(၂) လောကတစ်ခုလုံးနှင့် လိုက်လျောညီထွေအောင်နေပါ Jobs သည် မိမိ၏ အမြင်ကို ယုံကြည်သည်။ Jobs သည် Pepsi ဥက္ကဌကို မေးခဲ့သည် " မင်းဘ၀ကို အချိုရည်ရောင်းပြီး အချိန်ကုန်စေမှာလား? ဒါမှမဟုတ် ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲမှာလား? "။ အမျှော်အမြင်ကြီးလျင် ရည်မှန်းချက်မပျောက်ပါ။
(၃) အဆက်အသွယ်ကောင်းအောင်လုပ်ပါ Jobs က " ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားသည် အကောင်းဆုံး အဆက်အသွယ် ဖြစ်သည်" ဟု ဆိုသည်။ " ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရသော ဘ၀တစ်လျောက်မှာ ကြုံတွေမြင်ခဲ့ရသမျှ အရာတွေထဲက ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့သည်" ဟု Jobs ကဆိုသည်။ Micintosh ကို မထူထောင်နိုင်ခင်အထိ ဘ၀မှာ လေ့ကျင့်စရာမလိုတဲ့ လက်တွေ့သင်တန်းတွေကို သင်ယူခဲ့တယ်။ Jobs သည် India နှင့် Asia ကို ခရီးသွားခဲ့ပြီး ဖန်တီးမှုပညာရပ်နှင့် ဧည့်ခံလေ့လာခဲ့တယ်။ ဘ၀ကို စိတ်ကူယဉ်မနေဘဲ ကွဲပြားခြားနားသော နယ်ပယ်မှ အဆက်အသွယ်ကောင်းများရယူခဲ့သည်။
(၄) အကြောင်းအရာ တစ်ထောင် ပြောဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး Apple ကို ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ မျိုးမတွေးဘဲ Apple အား ရွေးချယ်ခဲ့တာကို ပိုဂုဏ်ယူတယ်။ ထုတ်ကုန် ၁၅၀ နဲ့ Apple ကုမ္ပဏီကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ စတင်ခဲ့ပြီး နောက် (၂) နှစ်အတွင်း ထုတ်ကုန် (၁၀) ခုအထိလျော့ချလိုက်တယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲ? တစ်ဦးချင်းစီ၏ ထုတ်ကုန်အပေါ်ကို "A Team" ထားနိုင်တယ်။ "မဖြစ်နိုင်ဘူး" ဆိုတဲ့အရာကို မင်းဘယ်လိုပြောမလဲ ?
(၅) မတူညီသော အတွေ့အကြုံများမှ ဆန်းသစ်မှုကို တီထွင်ပါ Jobs သည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို စိတ်ဝင်စားသော ၀ယ်ယူသူတွေကို ရှာဖွေခဲ့တယ်။ Apple store ကို ဖန်တီးဖို့ သူစိတ်ကူရလာခဲ့တယ်။ Moviing boxes ၊ stores အရည်အသွေးမြင့်မြင့် အစားသွင်းထားခြင်းကြောင့် သူတို့ဟာ ကွဲပြားနေလိမ့်မယ်။ မင်းအသုံးပြုဘူးတဲ့ အရာတွေထက် Apple စတိုးကို လာရောက်တဲ့ အခါ သင်တို့ အတွေ့အကြုံအားလုံးက သင်၏ဘ၀တစ်သက်တာကြွယ်ဝစေရန်နှင့် Apple က အမှတ်တံအကြား တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ချိတ်ဆက်မိစေရန် ဖန်တီး ရည်ရွယ်ထားသည်။ သင်သည် အဘယ့်ကြောင့် သင့်ဖောက်သည်တွေရဲ့ ဘ၀ကိုကြွယ်ဝဖို့ လုပ်နေရတာလဲ?
(၆) သတင်းစကားကျွမ်းကျင်ရမည် မင်းမှာ အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်ရှိနိုင်တယ် သို့သော် မင်းရဲ့ စိတ်ကူးတွေမဆက်သွယ်နိုင်လျင် အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ Jobs ဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး သတင်းစကားပြောသူ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခြားသူတွေလို တင်ဆက်မှု ရိုးရိုးလေး လုပ်မည့်အစား သူဟာ သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေတယ်၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတယ်၊ စိတ်ဓါတ်တွေကို နှိုးဆော်ပေးခဲ့ခြင်း နှင့် စိတ်ဝင်စားလာအောင် တစ်စုတစ်စည်းတည်းတင်ဆက်ခဲ့တယ်။
(၇) အိမ်မက်တွေကို စွန့်လွှတ်ပါ ( ကုန်ပစ္စည်းကို မဟုတ်ပါ) Jobs သည် customers တွေကို အမှန်တကယ်နားလည်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်တွေကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တယ်။ Tablets တွေဟာ သူတို့စိတ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန် သူတိူ့ကိုမဖမ်းစားနိုင်ဘူးဆိုတာ သူသိခဲ့တယ်။ ဒါဟာတိကျတဲ့အဖြေလား? Ipad ရှေ့မှာ ခလုတ်တစ်ခုဘဲပါတယ်။ ဒါဟာ အရမ်းကို ရိုးရှင်းပြီး (၂) နှစ်ကလေးတောင် သုံးတတ်တယ်။မင်းရဲ့ customers က အဲ့ဒါကို စိတ်မ၀င်စားဘူး။ သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက် နဲ့ သူတို့ ကိုယ်သူတို့ သာ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဒါကြောင့် Jobs သည် "မင်း ဖောက်သည်များက သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေဆီရောက်အောင် ကူညီနိုင်လျင် မင်းအောင်မြင်ပြီ" ဟု ပြောကြားခဲ့တယ်။